Kusemnyama ngomdlali oduke eyozama inhlanhla phesheya
UTHULANI Cele, umdlali wakuleli, okungaveli ukuthi udliwe yini njengoba umndeni wakhe wagcina ukukhuluma naye ekuqaleni kwenyanga esesikhumulweni sezindiza eGeorgia Isithombe: BACKPAGEPIX
Zakhele Xaba | June 23, 2022
USABAMBE umoya umndeni womdlali waseMlazi, uThulani Cele, osekuvele ukuthi akatholakali emajele aseGeorgia lapho eduke khona ekade eyozama inhlanhla.
UCele (22), owayengumdlali eqenjini leNedbank Ke Yona, AmaZulu neTS Sporting kwiGladAfrica Championship, ugcine ukuxhumana nomndeni wakhe ekuqaleni kwenyanga ethi usesikhumulweni sezindiza eGeorgia, uzogibela ibhanoyi elibuya eNingizimu Afrika.
Emuva kwesikhashana utshele umndeni wakhe ukuthi uyaboshwa. UCele, ogcine ukubonakala egijima kwiSummerfield Dynamos, ufulathele iNingizimu Afrika ngo-Ephreli 10 ezobuya ngoMeyi 10. Ubekade ehlelelwe ukuyohlolwa ikhono emaqenjini ahlukene yimenenja yaseNingizimu Afrika, uBaggio Collen, ihlangene neyaseGeorgia. Kuze kube manje akaziwa ukuthi ukuphi.
USipho Joyisi, ongenye yezimenenja ezinabadlali abaseGeorgia, uthe uthole abengakulindele ephoyiseni alijwayele alicele ukuthi limfunise uCele emajele.
"Kukhona iphoyisa esengilijwayele ngenxa yokuthi ngiya njalo eGeorgia. Ngilicelile ngoLwesibili ukuthi lisibhekele uThulani emajele. Ngilinike yonke imininingwane yakhe nesithombe kodwa libuye kimina lathi alimtholi uThulani emajele aseGeorgia. Lokhu kuyaxaka ngoba kuthiwa waboshwa. Ngikhathazekile ngoba iGeorgia yizwe elinokucwasa ngobuhlanga futhi liphezulu izinga lokushushumbiswa kwabantu. Umndeni wakhe ngiyaxhumana nawo, siyazama ukufuna ngayo yonke indlela," kusho uJoyisi.
Ngokusho kukagogo kaCele, uLindiwe Shongwe, okhulume neSolezwe ngoLwesibili, izinkinga zomzukulu wakhe ziqale efika eGeorgia elaxazwa ehhotela yimenenja afikele kuyona.
Lokhu kwenzeke phezu kokuba ekade eyinike imali yokukhokhela ihhotela engakasuki kuleli. Ugogo uveze ukuthi uCele nomunye umdlali ofike emuva kwakhe bagcine sebephucwa ama-passport ngumnikazi wehhotela ngenxa yesikweletu. Emuva kokufakelwa imali yokuthi engeze kweyethikithi lokubuya, uCele uphikelele esikhumulweni sezindiza nokuyilapho okuthiwa utshele umndeni ukuthi uyaboshwa.
UJoyisi uthe uke wahlangana noCele ngesikhathi naye eseGeorgia.
"Ngezwa ngiseGeorgia ukuthi kukhona abanye abafana baseMzansi abakhona. Ngiyile ukuyobabheka ngabathatha ngaya nabo lapho kuhlala khona abami. Ngibacelile ukuthi bezohlala nabami ngoba indawo ngiyayikhokhela esikhundleni sokuhlala ehhotela. Bagcine bethi bazokhuluma nemenenja yabo kodwa kwathuleka kanjalo. Abafana bami baphatheke kabi futhi bethukile ngendaba kaThulani," kusho uJoyisi.
Kubadlali abaphethwe nguJoyisi abaseGeorgia kukhona uBantu Mzwakali wodumo kwi-Ajax Cape Town neChippa United.
I-website ye-IOL, esesitebeleni seSolezwe, ibike ukuthi uMnyango wezokuXhumana namazwe uzonxenxa amanxusa asePoland ukuze kuzolandelwa umkhondo kaCele. Lokhu kungenxa yokuthi alikho inxusa laseMzansi eGeorgia.
Okhulumela lo mnyango, uClayton Monyela, uthe:" Udaba lulethwe kithina izolo (ngoMsombuluko) futhi asinawo amahhovisi amanxusa aseMzansi eGeorgia. Ngakho kufanele sisebenze nawasePoland ukuze aphenye ukuthi kwenzekeni ngoCele nokuboshwa kwakhe."
Umzala kaCele, uKhanda Manqele, izolo uthe akukho okusha asebekutholile mayelana nokulahleka kwalo mdlali.
Ngesikhathi uCollen ekhuluma kwiSA FM ngoLwesibili, uvumile ukuthi umdlali wamthumela eGeorgia kodwa uthe yena akaze alubeke kuleliya lizwe. Ubelokhu exhumana nemenenja ezinze khona izama ukumfunisa. Uqinisekisile ukuthi naye wagcina ukukhuluma nomdlali ngosuku olushiwo umndeni.